MSF oo Muqdisho ku Daaweysey 170 oo Dhaawac ah 7 Maalmood Gudahood - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhaawacyada Muqdisho ee la keenayo Cusbitaalka Dayniile ayaa weli socda 25ka Agoosto, oo ah maalintii saddexaad ee ay dagaallo xooggan ka socdaan caasimadda Soomaaliya
Kooxaha caafimaadka ee Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn /Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa 170 qof oo dhaawac ah ku daweeyey Cusbitaalka Dayniile wixii u dhexeeyay maalintii Isniintii ilaa iyo Axada,tiradaas oo ah tii ugu badneyd ee ah dhaawacyada la keeney ilaa bilowgii sanadka. Magaaladan ay dagaalladu halakeeyeen ayaa ay ka socdaan dagaallo sii xoogeystey ilaa toddobaadkan bilowgiisii.
Ururka ayaa ku guda-jira in uu daawooyin dheeri ah iyo qalab caafimaad oo kale uu u diro cusbitaalka si uu u taageero kooxda caafimaadka. Dhakhtar qalliin oo Soomaali ah oo saddexaad ayaa la qorsheeyey in uu kooxda ku biiro Khamiista, si uu culayska uga yareeyo kooxda MSF ee afar iyo labaatanka saac shaqeynayey tan iyo Isniintii.
“Shaqaalaheenna Soomaaliya jooga ayaa waxa ay daaweynayaan dhaawacyada dagaalka waxaana ay ku dadaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha caafimaad ee ballaaran ee ay keentey xaaladdan adag ee ka sii dareysa,” ayaa uu yiri Thierry Goffeau, oo ah Madaxa Ergada MSF. “Waxa aan ku tiirsannahay sahay caafimaad oo kale oo la dirayo waxaana aan teendhooyin ka dhisney bannaanka cusbitaalka si aan wax uga qabanno bukaannada badan ee ee soo qulqulaya.”
Dhammaan dhaawacyada waxaa sababey qarax ama xabbad. Dadka ayaa qaba dhaawacyo badan, waxaana u badan dhaawacyo dadka ka soo gaarey caloosha, lugaha, iyo xabadka. Ilaa hadda 38 bukaan ayaa u baahdey qalliin degdeg ah. Siddeed bukaan ayaa u dhintey dhaawacyadii soo gaarey, kuwaas oo afar ka mid ahi ay dhinteen markii la keeneyba.
“Iyada oo looga mahadinayo hawl-karnimada shaqaalaheenna Muqdisho, waxa aan sii wadi karnaa in qalliin nafo lagu badbaadinayo aan siinno dadka Soomaaliyeed ee ku dhex jira dagaalkan socda,” ayaa uu yiri Goffeau.
MSF waxa ay mashaariic ka waddaa siddeed gobol oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. In ka badan 1,300 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan in ka badan 100 shaqaale ah oo Nayroobi, Kenya jooga, ayaa waxa ay daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada, qalliin, iyo sahay biyo iyo mid gargaar ay siinayaan dadka soo barokacay. MSF dowlad kama qaadaneyso wax maaliyad ah oo ay ku maalgeliso mashaariicdeeda ay ka waddo Soomaaliya, iyada oo ku tiirsan oo keliya deeqo ay ka hesho shakhsiyaadka ku nool daafaha kala duwan ee dunida.
Tags: Banaadir, dagaal, dayniile, Muqdisho